Taunggyi - The Cherry Land: 9/1/07 - 10/1/07
မွေတော်ကက္ကူ ဘုရားကို ဧည့်သည်တစ်ယောက် လိုက်ပို့ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်က ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာမို့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အတွက် Virtual Tour လုပ်လို့ရအောင် ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်လာခဲ့တာ တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Guide တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘုရားရောက်တုံးကလဲ မိတ်ဆွေတွေကို သေသေချာချာ မရှင်းပြလိုက်နိုင်ပါဘူး.. အခုလဲ Description မဖော်ပြလိုက်တော့ ပါဘူး... ထူးခြားမယ်ထင်တဲ့ နေရာတွေ အားလုံးနီးပါးလောက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ လိုက်တဲ့အတွက် မကျန်ခဲ့လောက်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်... အားလုံးလဲ မွေတော်ကက္ကူ ဘုရားတွေ ဖူးမျှော်ရင်း စိတ်ချမ်းမြေ့ ကြည်နူးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 12:15:00 AM 1 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: VirtualTour, ဓါတ်ပုံများ
တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်အတွက် Blog မှာ Live တင်ပေးနိုင်အောင်လို့ Poll လေးလုပ်ပြီး အားလုံးရဲ့ အခြေအနေ လေးကို သိရအောင်လို့ တင်ပေးထားလိုက်တာ Vote လုပ်ပေးကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ? မသိဘူး
Live Post တွေ တင်ပေးပါ
ဓာတ်ပုံတွေ Live တင်ပေးပါ
သတင်းတွေ Live တင်ပေးပါ
ပွဲရက်အားလုံး Live ကြည့်ချင်တယ်
Video Broadcast နဲ့ကြည့်ချင်တယ်
You Tube မှာ Delay တင်ပေးပါ
Poll မှာ ပွဲရက်အားလုံး Live ကြည့်ချင်တယ်က Vote လုပ်တဲ့သူတွေ အားလုံးရဲ့ ၃၃%ရတဲ့ အတွက် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေ၊ သတင်းတွေ Live နီးပါး ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အဖွဲ့သားတွေ အားခဲထား ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး စလုပ်ရမှာဆိုတော့ အားလုံးရဲ့ အားပေးမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးအတွက်လဲ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေရဲ့ တန်ဆောင်တိုင် Liveကို ကျေနပ်မှု ရစေရမယ်လို့ အာမခံ ပါတယ်။ ဘာတွေ မြင်တွေ့ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ စောင့်စားရင်းနဲ့ မျှော်လင့် ကြပါလို့.....
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:56:00 PM6ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
"ဖြူစင်သော မိုးရေစက်၊ အေးမြသော ရာသီဥတု၊ မြင့်မားသော တောင်တန်း၊ ကွေ့ဝိုက်သော အတက်အဆင်း နှစ်ထပ်လမ်း၊ ရပ်နားစခန်း အလီလီနှင့် အစီအရီပွင့်သော ငုပန်းဝါ၀ါလွှမ်းခြုံနေသည့် ပန်းမြို့တော် (သို့မဟုတ်) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၏ မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့သည် ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့တွင် မြို့တည်သက်တမ်း ၁၁၃နှစ် ပြည့်မြောက်မည်ဖြစ်သည်။" အဆိုပါ စာသားတွေနဲ့ အစချီတဲ့ "ပေ လေးထောင်ကျော် အမြင့်က ၁၁၃နှစ်ပြည့် ရှမ်းမြို့တော်၊ ပန်းမြို့တော်" ဆိုတဲ့ စိုင်းအောင်မြတ် (တောင်ကြီး) ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က မမှီခဲ့ပေမဲ့ အခုပြန်ပြီး ၁၁၃နှစ်ပြည့် တောင်ကြီးမြို့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးဖတ်မိတော့မှပဲ တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ မသိသေးတဲ့ အချက်အလက်တွေ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီမှာ အအေးဆုံး ၈.၈ စင်တီဂရိတ် ရှိခဲ့တဲ့ ဒယ်အိုးပုံ တောင်ကလပ်မြို့လေး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ..
ရှမ်းဘာသာ "တွံတီ"၊ "တွမ်းတီး"၊ "ထောင်ကျည်း" ဆိုတဲ့ စကားကနေ တောင်ကြီးလို့ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ..
လူသိများတဲ့ အဆောင်အဦတွေက `အိမ်တော်´၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစည်းအဝေးခန်းမ (ကျားခေါင်း)၊ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ ဘူတာရုံ၊ စ၀်စံထွန်းဆေးရုံ၊ တောင်ကြီးဂေါက်ကွင်း၊ အေးသာယာ ဂေါက်ကွင်း၊ Taunggyi University၊ Technological University (Taunggyi)၊ Computer University (Taunggyi)၊ ပညာရေး ကောလိပ်၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း၊ သားဖွားသင်တန်းကျောင်း၊ သမ၀ါယမ သင်တန်းကျောင်း၊ မြို့မဈေးကြီး၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံကြီး၊ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး၊ အေးသာယာ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး သင်တန်းကျောင်းတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ..
တန်ခိုးကြီး ဘုရားစေတီများမှာ စူဋ္ဌာမုနိလောကချမ်းသာဘုရား၊ ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရား၊ မြစိမ်းတောင်ဘုရား၊ ပတမြားလှိုင်ဂူ ဘုရား၊ နဂါးနှစ်ကောင်ဆင်တဲ၊ ကိုးန၀င်းဘုရား၊ ရွှေချမ်းသာဘုရား၊ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား၊ ရွှေမုဋ္ဌောဘုရား၊ ရွှေမြင်တင်ဘုရား၊ ဓာတ်တော်ကြို ဘုရား၊ သက်စေ့ရန်အောင်ဘုရား၊ ဖရဲငွေတောင်ဘုရား၊ ရပ်တော်မူဘုရား၊ ဆုတောင်းပြည့် အောင်တော်မူဘုရား၊ ကုန်းသာဘုရား၊ ပေါ်တော်မူဘုရား၊ မြစင်္ကြာဘုရား၊ ရန်ကင်းတောင် ဘုရား၊ စသည်ဖြင့် ဘုရားစေတီပေါင်း (၄၈)ဆူ စံပျော်နေတယ်ဆိုတာ..
မြို့ပေါ်ဈေးများ ဖြစ်တဲ့ မြို့မဈေး၊ စ၀်စံထွန်းဈေး၊ အမှတ် (၅)ဈေး၊ ၂၁၂ ရဲဘော်ဈေး တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ..
တောင်ကြီးမြို့ဟာ ၄၂၀.၈၄ စတုရန်းမိုင်၊ ၂၆၉၃၃၇ ဧက ကျယ်ပြီး၊ အရှေ့အနောက် အကျယ်ဆုံးမိုင် ၂၀၊ တောင်မြောက် အကျယ်ဆုံး ၂၉မိုင် ရှိတယ်ဆိုတာ.. ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ ၂၇၂၀၉၂ဦး ရှိပြီ ဆိုတာ..
အော်တိုတယ်လီဖုံး ၄၄၂၂လုံး၊ လက်လှည့် ၅၅၀လုံး အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ.. (ADSL, IPSter, Dial Up နဲ့ GSM သုံးလို့ ရနေပြီး ဆိုတာတော့ ဆောင်းပါးမှာ မပါလာလို့ ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်..)
ပြည်နယ် အားကစားပြိုင်ကွင်း၊ မိုးလုံလေလုံ အားကစားရုံ၊ မြို့နယ်ဘောလုံးကွင်း (ရွှေညောင်)၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား ဘက်စုံ အားကစား ပြိုင်ကွင်း (ဂနိုင်ရေး) တွေ ရှိတဲ့ အကြောင်း..
အပန်းဖြေစရာ ရှုခင်းသာ ကြိုးတံတား ပန်းခြံ၊ Zool၊ ငါးဥယျာဉ်၊ မြကန်သာပန်းခြံ၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံတွေ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး၊ ရုပ်ရှင်ရုံ တွေ အနေနဲ့ မြသုခ၊ Bandula တို့ ရှိတဲ့ အကြောင်း.. ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုခန်း စုစုပေါင်း ၅၂ခု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း..
အဲ့ ဒီ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို တစုတစည်းတည်း ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် အများကြီး ဗဟုသူတရခဲ့ ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ကတော့ အောက်ပါစာသားတွေနဲ့ သူရဲ့ ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်..
"တောင်ကြီးမြို့ကို ပန်းမြို့တော် ဖြစ်ရေးအတွက် ချယ်ရီ၊ စိန်ပန်းပြာ၊ ငု၊ ထင်းရှူး၊ ကျောက်ပန်းနှင့် အလှစိုက် ပန်းအမျိုးမျိုးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာမှ နေရာအနှံ့ တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးလျက်၊ အမှိုက်ကင်းမဲ့ ဇုန်များ သတ်မှတ်ရှင်းလင်းကာ အထူးဆောင်ရွက်လျက် ရှိသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် တောင်ကြီးသည် မြို့သက်တမ်း ၁၁၃နှစ်မှသည် လှသထက် လှ၊ စည်သထက် စည်ကားလာဦးမည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များလည်း ၀င်လာမဆဲ တသဲသဲ ဖြစ်လာပေဦးမည် ဖြစ်သည်။"
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:55:00 PM4ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အိမ်တော် အဆောက်အဦးဟာ ဟိုးအရင်က အရေးပိုင်နေခဲ့တဲ့အိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၀က မီးလောင်ပြာကျခဲ့ပြီး ၁၉၃၁ခုနှစ်မှာ ယခုပုံစံအတိုင်း ကျောက်ရင်ကြီးများဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၁ နောက်ပိုင်းမှ စပြီး ဧည့်ရိပ်သာအဖြစ် သတ်မှတ် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၉-၉၀ မှာ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက ကျပ်သုံးဆယ်ကိုးသိန်းကျော် အကုန်ခံ မွန်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ ပါတယ်။ (၉၀ခုနှစ် ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်)
အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်း ကြမ်းခင်း၊ မျက်နှာကြက်မှအစ ဧည့်ခန်းဆောင်၊ စင်္ကြန်၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ စတာတွေကို အသစ်တဖန် ခေတ်မီပုံစံများနဲ့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံကာ ပရိဘောဂ အသုံးအဆောင် အသစ်များဖြင့် ဖြည့်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်လောက်က စာအုပ် တစ်အုပ်မှာပါတဲ့ အိမ်တော် အဆောက်အဦးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ရာစု အိမ်တော်ကတော့ ဘယ်လိုရှိလဲ မသိသေးပါဘူး။ ကြုံကြိုက်ရင် သွားပြီး လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ အခုပုံတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်သော အရိပ်ယောင်တွေပါ။ အမှတ်တရအဖြစ်ပါ။ သမိုင်းဆိုတာ အရင်နဲ့ အခုရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကိုလဲ ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:33:00 PM6ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 8:47:00 PM3ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ Transportation System မှာ ပါတဲ့ Bus ကား လိုင်းတွေ အများစုက မြို့မဈေးမှာ စုံရပ်အဖြစ်ထားကြ ပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ ရဲ့ မြောက်ဘက်ကနေ တောင်ဘက်အခြမ်းကို သွားချင်တဲ့သူတွေက မြို့မဈေးမှာ ကားပြောင်းစီးကြရ ပါတယ်။ လိုင်းကားနှစ်ဆင့်စီးမှ လိုရာခရီးကို ရောက်ပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ လမ်းလျောက်သွား ကြရပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက လိုင်းကားတွေဟာ များသောအားဖြင့် လူစုံမှ ထွက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုတော့ ကားလိုင်း အသစ် တိုင်ရိုက် ယာဉ်လိုင်း (၃)ခု စီစဉ်ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလှည့်ကြ Time Stamp နဲ့ ထွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ လိုင်းအသစ်တွေကြောင့် အရင်ကထက် လမ်းလျှောက်ရတာ၊ ကား စောင့်ရတာ၊ ဆိုင်ကယ် လိုအပ်တာတွေ လျော့ကျကောင်း လျော့ကျသွားမယ်လို့ ယူဆထားကြ ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် Hilux Bus ကားတွေ နေရာမှာ Mini Bus တို့ Bus ကားကြီးတွေ ဖြစ်လာပြီး ခရီးသွားတွေ အားလုံးအတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပိုအဆင်ပြေလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 8:23:00 PM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ထီသိမ်ကန်ဆိုတာ ရုရှားကန်လို့လဲ လူသိများပါတယ်။ တောင်ကြီးမြို့ နေရာတော်တော်များများကို သောက်ရေ သုံးရေ အတွက် အဓိက ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ ရေကန်ကြီးပါ။ တော်ကြီးမြို့မှာ ရေလှောင်ကန်ကြီး (၃)၊(၄)ခု ရှိပါတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ အတွက် သောက်ရေသုံးရေအတွက် ရေမထွက်တဲ့ နေရာတွေကို နွေရာသီမှာ အဲ့ဒီ ရေကန်ကြီးတွေက ရေပေးဝေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျွန်တော် မှတ်သားရသလောက်ကတော့ စ၀်စံထွန်းဆေးရုံ ဆောက်တုန်းက ရုရှား Engineer တွေက ဆေးရုံအလုပ်သမားတွေ ရေအဆင်ပြေစေဖို့ ဆောက်လုပ်သွားတာလို့ သိရပါတယ်။ ဆေးရုံတစ်ခုအတွက် တွက်ချက်ရွေးချယ် ဆောက်ပေးခဲ့ရာကနေ တောင်ကြီး တစ်မြို့လုံးကို ရေးပေးလို့ ရတဲ့ အထိ အသုံးဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကန်အမြင့် ၃၂ပေရှိပြီး၊ ရေ ၁၆၁သန်း သိုလှောင်ထားနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
ရေထိမ်းမျှော်စင်က ရေအောက်ရောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တံခါး အဖွင့် အပိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ရေငုပ်ပြီး သွားရတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့က အခု လူဦးရေ တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့ အတွက် ရုရှားကန်တစ်ခုတည်း အနေနဲ့ မိုးတွင်းမှာ ရေ အပြည့်မရရင် နွေရာသီအတွက် အခက်အခဲရှိနိုင်မယ်လို့ တွေးပူကြပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့ ကန်ပြည့်ရုံတင်မက လျှံလို့ များလို့ ဖြစ်နေပါပြီ။
ထီသိမ်ရေထွက်ကတော့ (၁၂)လလုံး ရေထွက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထီသိမ်ရေကန်နဲ့တော့ သိပ်အနီးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ရေကလဲ ထီသိမ်ကန်ထဲကို ၀င်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ထီသိမ်ကန်ထဲက ထွက်တဲ့ ရေထွက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကလာမှန်းလဲ မသိပါဘူး။ မြေအောက်ရေကြောကပဲ ထွက်လာတာနဲ့တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေတွေက မိုးတွင်းမှာ နောက်နေတော့ ဘယ်လို ယူဆရမှန်း မသိတော့ပါဘူး။
နေရာက ကျောက်တန်းရွာနားမှာ ရှိပါတယ်။ နွေ/ဆောင်း ရာသီတွေမှာ ရေဂါလံ (၃၀၀၀၀၀) ကျော် ထွက်တယ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရေထွက်က (၂)နေရာလို့ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်နေရာက ရေပမာနများပါတယ်။ ရေပွက်တွေထပြီးတော့ကို ထွက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေရာကတော့ ကျောက်ဆောင်တွေကြားကထွက်တာ ဖြစ်ပြီး။ ရေထွက်ငြိမ်ပါတယ်။ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တုန်းက တောင်ကြီးမြို့မှာ မိုးသည်းပြီးတဲ့ နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရေတွေကတော့ နောက်နေပါတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ကြည်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေစစ်ကန်မှာတော့ အဲ့ဒီ ရွံ့တွေကို သန့်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒုတိယ ရေထွက် နှုန်းတွေနဲ့ ရေတွေ နောက်နေပါတယ်။ ရေထွက်နေမှန်းတောင် မသိသာတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာကနေ ၄လှမ်းလောက်ကွာတဲ့ နေရာမှာတော့ အပေါ်က ပထမရေထွက် ရှိပါတယ်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 7:53:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 9:13:00 PM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ကျွန်မတို့ဆယ်တန်းနှစ်တုန်းကတော့အပေါ်အကျီ င်္ ဆင်တူဝတ်တဲ့အပြင် လွယ်အိပ်လည်းဆင်တူလွယ်ကြပါတယ်..
ပထမတစ်ပွဲကတော့ နှုတ်ဆက်ပွဲ ဖြစ်ပြီး
နောက်ဆုံးတစ်ပွဲကတော့ ရင်အခုန်ဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့ ရင်အတုန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အတန်းတင်စာမေးပွဲ ပါပဲ.
ရေးသားသူ Chan Mon အချိန် 3:22:00 PM9ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ ကိုချမ်း အချိန် 11:15:00 AM7ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တေးရေးဆရာ လှိုင်းဇော်ဝင်း(ခ)မောင်ဇော်ဝင်းသည် ဦးခွန်ဟိန်းအောင်ထံသို့ ကက္ကူအလွမ်း တေးစီးရီးခေါင်းစဉ် အပါအဝင် သီချင်း(၁၁)ပုဒ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဦးခွန်ထွန်းမောင်ထံသို့ နှောင်းသီချင်း အပါအဝင် သီချင်း(၁၀) ပုဒ်ကိုလည်ကောင်း၊ ဦးအောင်ဇေယျာလွင် ထံသို့ ကောင်းချီးဆုကမ်းမယ် သီချင်းအပါအဝင်(၁၁)ပုဒ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဦးစိုင်းထွန်းအောင်ထံသို့ လက်နုသွယ်ပန်းသီချိန် တေးစီးရီးတွင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သော အလွမ်းရောင်နှလုံးသားသီချင်းအပါအဝင် သီချင်း(၁၂)ပုဒ် ကို လည်းကောင်းရောင်းချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထို့သို့ရောင်းချ၊ ဝယ်ယူပြီးဖြစ်သော တေးသီချင်းများကို ယခုအခါ တေးရေးဆရာ လှိုင်းဇော်ဝင်း(ခ) မောင်ဇော်ဝင်း ကအခြား သူများထံသို့ ထပ်ဆင့်ရောင်းချနေကြောင်းသိရပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ ရောင်းချပေးပြီးသောတေးသီချင်းများကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းများအရ ထပ်မံရောင်းချခြင်းမပြုရန်တေးရေး ဆရာလှိုင်းဇော်ဝင်း(ခ) မောင်ဇော်ဝင်းကို သတိပေးကြော်ငြာလိုက်ပါသည်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 8:15:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 9:08:00 PM7ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
meeo ရဲ့ post ကိုဖတ်ပြီးကျမလဲ post ရေးချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်…..
ကျမလဲတောင်ကြီးမှာနေ ကတည်းကသူပြောတဲ့ဂျူးပဲပုတ်ကြော် ၊ အသားတု
ကြော် ၊ တို့ကိုစားခဲ့ဖူးပါတယ် ။ကျမက ပဲပုတ်ကြိုက်တဲ့သူမို့လားတော့မသိဘူး
စားကောင်းနေတာဘဲ တကယ်လဲ လုပ်ရောင်းတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်း
ပါတယ်။ ကျမဘန်ကောက်ကိုရောက်လာပြန်တော့လဲ အဲဒီ ဂျူးပဲပုတ်ကြော် ၊
အသားတုကြော် တွေနဲ့လဲမကင်းခဲ့ပြန်ပါဘူး ကုန်ခါနီးတိုင်း လူကြုံနဲ့အိမ်က
ထည့်ပေးနေလို့ အိမ်မှာ အမြဲမပျက်ရှိနေတာ ၊ ထမင်စားတိုင်း ပါနေတာလဲ
ဒီပဲပုတ်ကြော်ပဲပေါ့ အဲဒါအပြင်ကျမအိမ်မှာ အမြဲရှိတတ်တာကတော့ မျစ်ချဉ်
ခြောက် ၊ ဆွန်ထန်ခြောက် ၊ မန္တလေးကဝက်အူချောင်း ၊ မြေပဲဆီ ၊ မိုးကုတ်
ပဒေဿာလက်ဖက်တွေပါမကျန် ရိုးအီတယ်လို့မရှိဘဲ မပြတ်မလပ်စားနေခဲ့ရ
ပါတယ် ဒါပေမဲ့လဲ ဘာကို စားချင်လို့ စားချင်မှန်း မသိဘဲ ကိုယ့်မြို့ရဲ့အစား
အစာကိုတမ်းတနေရတာလဲ အမြဲတန်းလိုလိုပါဘဲ ကျ မအမြဲလိုလိုတမ်းတမိတဲ့
အစားအစာတွေကတော့ ကျမရဲ့မနက်စာအဖြစ်အမြဲစားတတ်တဲ့ ဒေါ်နန်းပန်
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ နဲ့ ထိုဖူးနွေး ၊ အမှတ် (၅ ) ကျောင်းနားက ဆီချက် ၊ ရေစိမ် ၊အ
မှတ် (၄ ) ကျောင်းနားက ဖက်ထုပ်ကြော် နဲ့ မြီးရှည် ၊ သူ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က
ချဉ်ငံစပ် ၊မြို့မဈေးထဲကဟင်းထုပ် ၊ ငါးထမင်းနယ် ၊ဝက်သားချဉ်နဲ့ငရုပ်သီးလုံးကြော်
ကြွပ်ကြွပ်လေး၊ ဘေးကပ်လျက်က အေးမုန့်တီပူပူလေး ၊ နေ့လည်ပိုင်းဆိုရင်
ရွှေလည်တိုင်က ထိုဖူးသုတ်နဲ့ထိုဖူးကြော် ၊ ညဈေးထဲက ကော်ပြန့်ကြော်၊
ငါးဖယ်ကြော် ၊ ဝါပြားကနှမ်းထောင်းခေါပုတ် ၊ ဈေးထဲကရွှေနီငှက်ပျောသီး၊
ထောပတ်သီး ၊ မုန်ညှင်းချဉ် ၊ ထိုဖူးချဉ် ၊ မျစ်ချဉ် ၊ အမေကြော်ကျွေးတဲ့ငါး
ဒုက္ခ ၊ ပဲဟင်းဆေးခါးနဲ့ဂျူးသုတ် ၊ The Ranch ကကြေးအိုး ၊ စတဲ့အစားအ
တဲ့အစားတွေဘဲပေါ့ .......ကဲစဉ်းစားကြည့်လိုက် အစားပုတ်တယ်လို့မထင်မိ
ဘူးလား..ဘာဘဲပြောပြောကိုယ့်မြို့မှာ ကိုယ်နေတုန်းကတော့ တစ်နေ့ငါဒါ
တွေကို လွမ်းရလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိတာ အမှန်ပါဘဲ ...
ကျမစားချင်တဲ့အစားအစာတွေရယ်ကိုဘဲ တမ်းတမ်းတတ လွမ်းဆွတ်နေမိ
sue wan ပေးပို့လာသော အီးမေး ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 5:18:00 PM6ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
မြန်မာပြည်သည် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ် မခံရသေးပါ ။ဥရောပ တိုက်တွင်မူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် မိမိ၏ တည်မြဲမှုအတွက် စစ်တိုက်နေရသည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှအင်ပိုင်ယာ၏ ချောက်ကျသော နေရာတွင် ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံကို မည်သူကမျှ ဂရုမစိုက်သဖြင့် စစ်တိုင်လာမည် မဟုတ်ဟု ကျွန်မတို့ကို ထပ်တလဲလဲ အာမခံချက်ပေးနေ၍ တောင်ကြီးမြို့သူမြို့သားများသည် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ပါးပါး နေခဲ့ ကြပါသည်။ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်အတွက် တွေးတော ပူပင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
သို့ဖြစ်၍ ဥရောပတိုက်သားများက အကမပျက် အသောက်မပျက် အပျော်မပျက် နေခဲု့ကြသည်။ တို့တတွေ မကြာခင် ဘ၀ဆုံးတော့မှာပဲ ဆိုသော အသိက ရှိနေလို့များ ထင်ရာမြင်ရာ စွတ်လုပ် ကြလေရော့သလား၊ သို့မဟုတ် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့လာမည့် ဘေးဆိုး အန္တရာယ်ကို သတိမမူ ဂူမမြင် ရှိနေကြရော့သလား မသိပါ။
တောင်ကြီးမြို့တွင် ဥရောပတိုက်သား ၁၅၀ ခန့် ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဗြိတိသျှ အရာရှိများနှင့် သာသာနာ့ပြု အဖွဲ့မှ အီတာလျှံ သီလရှင်များဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးချမ်းသာသော မြန်မာလူမျိုး ၊ရှမ်းလူမျိုး ၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ကပြား ၊ အင်္ဂလိပ် ကုလား ကပြား ၊ ၀တ်လုံ များ ၊ ရှေ့နေများ ၊ ကျောင်းဆရာများ ၊ ကုန်သည် ပွဲစားများသည် အငြိမ်စားယူပြီး တောင်ကြီးမြို့၌ အခြေခြနေကြသည်။ အလွန်အေးချမ်းသောနေရာ စစ်၏ အနိဌာရုံများနှင့် ကင်းဝေးသည့်နေရာဟူ၍ မှတ်ထင်ထားခဲ့ပါသည်။
ဝေးလံသောဒေသမှ အမြောက်သံ ၊ ဗုံးသံများ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေသည်ကို သတိမမူမိကြပါ။ ကျွန်မ၀ယ်ထားသော ရေဒီယိုမှ ဂျပန်တို့ ပုလဲ ဆိပ်ကမ်းကို ဗုံးကြဲပုံ ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ စစ်ထဲ ၀င်လာပုံ၊ မလေးပြည်နှင့် ယိုးဒယား နိုင်ငံများကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ပုံ ၊ ပရင့်စ်အော့(ဖ်)ဝေးလ်နှင့် ရီပါ့လ်စ် စစ်သဘောင်္ကြီး ၂ စီး နှစ်မြုပ်သွားပုံတို့ကို နားထောင်ကြားသိနေကြစေကာမူ ကျွန်မတို့တတွေသည် စစ်နယ်ပယ် အတွင်းသို့ မရောက်နိုင်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။
ေ၉၄၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ကို ဂျပန်ဗုံးကြဲ လေယာဉ်များက ဗုံးလာကြဲသည်။ စစ်သေနတ်နှင့်လည်း ပစ်သေးသည်။ အစိုးရလုပ်ငန်းများလည်း ရပ်သွားခဲ့သည်။
အမှန်မှာ ဗုံးကြဲသည့်နေ့ကို အထူးတလည် မှတ်မိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ တောင်ကြီးမြို့ “ဆေးကရက်ဟတ်“ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ကျွန်မ၏ ညီမ အစ္စဘယ်နှင့် ၀ါလတာဖူးလား တို့နှစ်ဦး လက်ထပ်သော နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်နေ၍ မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပရိတ်သတ် အနည်းငယ်ကိုသာ ဖိတ်ကြားသည်ဖြစ်၍ အေးအေး ဆေးဆေး ရှိလှသည်။
၀ါလတာ၏ အမ နှစ်ဦးမှာလည်း သူနာပြုဆရာမကြီးများပင်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်ကို ဗုံးကြဲသောနေ့တွင် တောင်ကြီးသို့ ရောက်နေခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အိန္ဒီယပြည်သို့ ကုန်လမ်းမှ စစ်ပြေးကြရာတွင် လမ်းခရီး၌ သေဆုံးသွားကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ရုပ်ကလာပ်ကို လမ်းဘေးတစ်နေရာတွင် တွေ့ရသော အချိန်၌ လက်ထဲတွင် စာရွက် တရွက် ကိုင်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စာရွက်သည် မစ္စ၀ီလ်ဘီဆိုသူ အမျိုးသမီးက သူနှင့်သူ၏ ကလေး တစ်ဦး သေရအံ့ဆဲဆဲတွင်ပေးသွားသော သေတမ်းစာပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ ဆာရယ်ဂျီနယ်ဒေါ်မန်စမစ်သည် လူအများအား မိမိတို့ တာဝန်ကျသောနေရာများတွင် နေကြရန် စိတ်အားထက်သန်စွာတိုက်တွန်းသွားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ရှိနေပါသည်ဟု ပြောသွားခဲ့သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်မြို့ကို ပထမ အကြိမ်ဗုံးကြဲ ခံရသည့် အချိန်တွင်ပင် မြို့ပေါ်ရှိ လူအများအပြားသည် ဘုရင်ခံ၏ စကားကို အယုံအကြည်မရှိကြ၍ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် ထွက်ခွာသွားသေးသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် ခရစ္စမတ်နေ့တွင် နောက်တစ်ကြိမ် ဗုံးလာကြဲချသောအခါ ထောင်ပေါင်း များစွာသော မြို့သူမြို့သားများသည် အထက်ဗမာပြည်သို့ တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ် ထွက်ပြေးကုန်ကြသည်။ ဥရောပတိုက်သား များနှင့် အခြားစစ်ပြေးများပါ တဖြည်းဖြည်း တောင်ကြီးမြို့သို့ ရောက်လာကြသည်။
ကျွန်မတို့တစ်တွေက ဂရုမထားခဲ့စေကာမူ စစ်ကြီးသည် ကျွန်မတို့ထံသို့ ဆိုက်ရောက်လာပါပြီ။
သတင်းတွေကား မယုံနိုင်စရာဖြစ်နေသည်။ “ကျွနုပ်တို့၏ စစ်သည်များသည် ဂျပန်လူဝါကလေးများထက် စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သည်၊ ကျွနုပ်တို့၏ လေယာဉ်တွေက ပိုမိုခေတ်မီပြီး ဂျပန်လေယာဉ်ပျံများကို မြန်မာ ကောင်းကင်မှ မကြာမတင် ရှင်းလင်းပစ်တော့မည်“ ဟူ၍ ကျွန်မတို့ကို သတင်းလွှင့်ထားပါသည်။ အမှန်မှာ ကျွန်မတို့တွင် လေယာဉ်မရှိပါ။ ကျွန်မတို့၏ စစ်သားများကလည်း လေ့ကျင့်မှု မပြည့်ဝသည့် အပြင်လက်နက်များက ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီ။
မြန်မာပြည်မှ ဆုတ်ခွာရေး အစီအစဉ် ကို ကျွန်မ ဝေဖန်ချင်ပါသည်။ အစီအစဉ်က ကမောက်ကမ နိုင်လှပါသည်။ မြန်မာပြည်မှ ဆုတ်ခွာရာတွင် မည်သည့်အတွက် ရန်ကုန် ရေလမ်းခရီးဖြင့် မဆုတ်ခွာ စေသနည်း။ နယ်စပ် တောင်ပေါ် ဒေသများသို့ စစ်ပြေးများအား စေလွှတ်ရာတွင် မည်သည့်အတွက် ကြိုဆိုလက်ခံရေးအဖွဲ့များ ကြိုတင်မစီစဉ်ခဲ့သနည်း။ တကယ်လို့များ တောင်ကြီးမြို့က ထွက်ခွာရမည်ဆိုလျှင် မည်သို့ ထွက်ခွာကြမည်နည်း။ ကျွန်မသည် ထိုအချိန်အထိ တောင်ကြီးမြို့က ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေးကြရလိမ့်မည် ဟု မထင်မှတ်သေးပါ။
ပျော်ပျော်ပါးပါး နှင့် အချိန်များ ကုန်သွားခဲ့သည်။ တောင်ကြီးကလပ်တွင် ဖဲရိုက်မပျက် ၊ အရက်သောက်မပျက် ၊ အကမပျက် ရှိကြသည်။ ကျွန်မကတော့ အရာရှိကတော် အချို့ကို သူနာပြုသင်တန်းပေးသည်။ ဆေးသေတ္တာများ ထုပ်ပုံထုပ်နည်း ၊ ကျပ်စည်းပုံစည်းနည်း များ သင်ပြေပေးသည်။ အရာရှိကတော် အချို့ကလည်း ရှမ်းစော်ဘွားသားများ ကျောင်းတွင် ယာယီဖွင့်ထားသော စစ်ဆေးရုံရှိ ဒဏ်ရာရ စစ်သားများကို သွားရောက် အားပေးသည်။ ဂျပန်များ ရန်ကုန်သို့ ချီတက်ရာတွင် ကြားဖြတ် ခုခံ တိုက်ခိုက်ခဲ့၍ ဒဏ်ရာ ရလာသူများ ဖြစ်သည်။
ကျွန်မမှာ အပျော်အပါးများကို စိတ်ကူးရန် အချိန်မရ ပါ။ ဆေးရုံအလုပ်နှင့်ပင် မအားလပ်အောင် ဖြစ်နေပါသည်။ ငှက်ဖျားရောဂါ ၊ ၀မ်းကိုက်ရောဂါက တစ်မျိုး ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များက တစ်ဖုံ ၊ အူအတက်ပေါက်သူများ ခွဲစိတ် ကုသရေးက တစ်သွယ်ဖြင့် မိုးလင်းက မိုးချုပ် မအားရပါ။
ဆေးရုံတွင် အမှုထမ်းများက နည်းရသည့်အထဲ ဆေးရုံအုပ်ဆရာဝန် ဗိုလ်မှူးကြီး တက်ကင်း(စ)တန် ကိုစစ်တပ် ကဆွဲထားသေးသည်။ အစားပေးသူက တရုတ်မြန်မာ ကပြား၊ အသက်ကြီးပြီး ပင်စင် ပေးဖို့ပင် လွန်နေသော အရွယ်ကြီးဖြစ်သည်။
နောက်ပြီး အမေရိကန် သာသနာပြုအဖွဲ့မှ ဆရာဝန်ကြီး ဂေါ်ဒင်ဆီဂရေ့၏ ဆေးရုံမှ လေ့ကျင့်ပေးလိုက်သော သူနာပြုဆရာမကြီးခြောက်ဦး ၊ အဆောင်စောင့် လေးဦးနှင့် တိုင်းရင်းသားဆရာဝန် လေးဦးတို့လည်း ဆေးရုံသို့ ရောက်လာကြပါသည်။
စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ တဖြည်ဖြည်း ရောက်လာကြရာ ကျွန်မတို့၏ သီးသန့်အခန်းများကိုပင် ပေးထားရသည်။ ကျွန်မတို့၏ တာဝန်က ပိုကြီးလာသည်။ စစ်ပြေးများထဲတွင် မျက်နှာဖြူများလည်း ပါရှိပါသည်။ အချို့သော မျက်နှာဖြူများ၌ အဖိုးထိုက် အဖိုးတန် ရွှေငွေ ကျောက်သံ ပတ္တမြားများကို အင်္ကျီ အနား ချုပ်ရိုးများတွင် ၀ှက်ပြီး ယူလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ၀ှက်ယူလာသည်များကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ ဒေါပွမိသည်။ အမှန်တော့ အရေးရယ် အကြောင်းရယ် လို့ ပေါ်လာလျှင်ထုတ်သုံးဖို့ လွယ်ကူရန် ယူဆောင်လာကြသည်ကို ကျွန်မအနေဖြင့် ဒေါမပွသင့်ပါ။ ထိုအချိန်အခါက ကျွန်မစိတ်ထဲတွင် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရော လူစားမျိုးကို ရွံမုန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုစိတ်ဓါတ်သည် ၁၉၁၉ ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော တုပ်ကွေးရောဂါ ကပ်ထဲ၌ ကျွန်မ သေမလိုဖြစ်ခဲ့ရာမှ အမွေရလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မေမေ က ပြောပါသည်။
ကျွန်မသည် ထိုအချိန်က မြန်မာပြည်၏ အရှင်သခင်များ(အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါ) ကို မျက်စိထဲတွင် ကြည့်မရခဲ့သည်ကိုတော့ ၀န်ခံပါသည်။ ထိုသို့သော အရှင်အခင်ကြီးများသည် ဆားဗစ်(စ) ဆိုသည်မှာ တင်းနစ် ကစားရာတွင်စပေးရသည့်ရိုက်ချက်ဟု ထင်မှတ် နေကြသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို အပြစ်တင်၍လည်း မဖြစ်ပါ။ သူတို့သည် ပညာကို ကောင်းစွာသင်ကြား လာကြသူများ ၊ ဥာဏ်ရှိသူများ ဖြစ်သော်လည်း စနစ်တစ်ခု၏ သားကာင် များဖြစ်ပါသည်။ တင်းကျပ်သော လူတန်းစား ဖွဲ့စည်းပုံက သူတို့အား ထိုင်းမှိုင်း သွားစေခဲ့ပါသည်။
အရာရှိကြီး တစ်ဦးဦး၏ အိမ်သားစာရင်း ၀င်သွားပြီ ဆိုပါက အခြွေအရံ ၊ ကျေးကျွန်များက သူ့နေရာနှင့် သူ ရှိနေကြပြီး ဖြစ်၍ ဘာတစ်ခုမျှ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန် မလိုတော့ပါ။ ထမင်းချက် ၊ ကလေးထိန်း ၊ စားပွဲထိုး ၊ အစေခံများကို အမိန့်ပေးရုံနှင့် အစစ ပြည့်စုံ သွားကြ၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးချင်စိတ်ပင် မရှိတော့ပါ။
အိန္ဒိယပြည်သို့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားသူ များတွင် စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာသူများ ၊ အစွမ်းအစ ရှိသူများ ပါဝင်ကြပ့ါသည်။ တောင်ကြီးသို့ ရောက်လာကြသူများသည် ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ကလပ်ကို သူတို့၏ ဘ၀ ရပ်တည်ရေး လည်ပတ်ရန်အတွက် ဗဟိုပြုနေ ကြသည်။ ကလပ်မှ နေ၍ လှုပ်ရှားနေခြင်းဖြင့် လူဖြူ မဟုတ်သော လူတန်းစားအလွှာ အသီးသီးထက် သီးခြားကင်းလွတ် မြင့်မြတ်သူများ အဖြစ်ပြူမူနေကြပါသည်။
ယနေ့ခေတ်လူတွေက အသားရောင် ညိုမှောင် စေရန်အတွက် နေပူစာလှုံရန် နေရာများကို ရှာဖွေကြသည်။ မြန်မာပြည်တွင်မူ နေရောင်ကောင်းကောင်း ရပါလျှက် အမျိုးသမီးများက သူတို့၏ ဆင်စွယ်ရောင် အသားကို ကာကွယ်ရန် နေရိပ်ကို ခိုကြသည်။ဆင်စွယ်ရောင် အသားပိုင်ရှင်သည်သာ လူတန်းစား ခွဲရာတွင် ထင်ပေါ်သည် မဟုတ်ပါလား။
ခြေအိတ်လက်အိတ် အရှည်များ ၀တ်ခြင်း ၊ အရိပ်ထဲ၌ နေခြင်းတို့ကို ကျွန်မ မကြိုက်ပါ။ ကျွန်မ၏ မိဘများက သူတို့၏ အပေါင်းအသင်းရိပ်မြုံထဲသို့ မ၀င်စေလို၍ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မ၏ မိဘများသည် ဥရောပ တိုက်သူတိုက်သားများဖြစ်၍ ကျွန်မကို အသားရောင်ကြောင့် မည်သည့်အခါတွင်မျှ သူတို့ အပေါင်းသင်းမှ ဖယ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အဖြူရောင်၏ အာနိသင်သည် မည်သည့် အရာနှင့်မဆို ကွဲပြားခြားနား သည်ဟူသော အတွေးအခေါ် ကို ကျွန်မ ကြီးပြင်းလာသော ပတ်ဝန်းကျင်က လက်ခံ ယုံကြည်နေသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မ၏ အသားရေမှာ ပျားရည်ရောင်ထနေပါသည်။ ဥရောပသူများလို ဖြူဖြူကြမ်းကြမ်း မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍သာ ကျွန်မသည် အင်္ဂလိပ် မြန်မာကပြား ၊ သို့တည်းမဟုတ် အင်္ဂလိပ် ကုလား ကပြားဖြစ်နေမည် ဆိုပါက နှိမ့်ချခြင်း ၊ အပေါ်စီးမှ ကြည့်ခြင်း ၊ မထိတထိ စောင်းမြောင်း ပြောဆိုခြင်းတို့ကို ခံရမည်မှာ သေချာလှပါသည်။ ပေါ်တူကီသွေးက တစ်ဝက် ၊စကော့သွေးက တစ်ဝက်ဖြစ်၍သာ သက်သာမှု ရခဲ့ပါ၏
ကျွန်မ၏ မိဘအရင်းခြာများကို မဆိုထားဘိ ၊ ပေါ်တူဂီ လူမျိုး ဗတ်(စ်)ကိုဒဂါးမားနှင့် စကော့လူမျိုး ရောဘတ်ဆန်း(စ) တို့နှင့် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း ဖြစ်ရသည်ကို ပြောင်းလဲလိုစိတ်မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် ကျွန်မ၏ စိတ်ထဲတွင် လူဖြူမျိုး ဖြစ်ရသည့်အတွက် အခြားသူများထက် မြင့်မြတ်သည်ဟူ၍ မယူဆပါ။ လူပျိုလူလွတ် ဥရောပတိုက်သား တစ်ဦးနှင့် တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးတွဲလာ နေသည်ကို မကြည့်လို၍ ကပွဲမှ ထွက်သွားသူများ အပေါ်တွင်လည်း ကျွန်မက သည်းခံနိုင်သူ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်မသည် အသားရောင်ခွဲခြားခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန် သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်တော့ မဟုတ်ပါ။ အသားရောင်ခွဲခြားမှု စနစ်၏ မညီမျှမှုကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုနေသူ မဟုတ်သလို ၊ အနှိမ်ခံ လူတန်းစား များအတွက်ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေခြင်းလည်း မရှိပါ။ ကျွန်မနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ သော သူများအတွက် လက်ခုပ် တီးမိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ ဘ၀ အတွေ့အကြုံများက လူတန်းစား ခွဲခြားခြင်းသည် တန်ဖိုးမရှိဟူ၍ သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ၏ ဘ၀တွင် ယင်းသင်ခန်းစာကို မေ့ပျောက် လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 8:28:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းကို တွေးမိရင်း မှတ်မိနေသော အကြောင်းအရာတစ်ခုက ပေါ်လာသည်။
ထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး..အင်းသူအင်းသားများနှင့် ပါတ်သတ်၊ ဆက်စပ်၊ စပ်နွယ် နေလို့ပါ။ အရမ်းကြီး ဆက်စပ်လားဆိုတော့လည်း အဲလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုရေးရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့လေ။ ကုန်ကြမ်းကလည်း တယ်ရှားသကိုး။ ရေးချင်စိတ်ကတော့ အမြဲရှိပါတယ်။ အကြောင်းအရာက ရှာလို့မရတာ အခက်ဖြစ်နေလို့လေ။
ဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့ အချိန်လောက်ကပေါ့။ အတိအကျပြောရရင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ရဲ့ နွေအကုန်၊ မိုးအကူးကာလလေးမှာပေါ့။ အဲတုန်းကတော့ ဆယ်တန်းဖြေပြီးစ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်လေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း၊ ကွန်ပြူတာသင်တန်းများတက်ရောက်ရခြင်းဟာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း အင်္ဂလိပ် စကားပြောသင်တန်းကို တက်ရောက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွင် တက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ မာသာကြီးတစ်ယောက်က သင်ကြားပေးသည်။ ဒီလိုနဲ့ သူသင်ပေးတာတွေကို သင်ကြားရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပြောကြတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့် ကုန်ကြမ်းလေးအစပြုတာပေါ့။ နေကောင်းလား? ကျန်းမာလား? မောင်နှမ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ? ဒီလိုနဲ့ မေးရင်းမေးရင်း ဘာဟင်းချက်လဲ လို့ ကျွန်တော်အမေးခံလိုက်ရသည်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်ကလည်း နောက်ချင်လာသည်။ ကောင်မလေးကလည်း လှတပတလေးကိုး အဟီး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က trouble fish curry လို့ဖြေလိုက်သည်။ ကြောင်သွားပုံရသည်။ မာသာကလည်း သူလည်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးတဲ့လေ။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တော်တော်ရီချင်သွားသည်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပဲ ရှင်းပြရတာပေါ့။ အင်းသားရိုးရာ ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ငါးဒုက္ခဟင်းလို့ခေါ်ကြောင်းပေါ့။အဆစ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုချက်ကြတယ်ဆိုတာကိုပါထည့်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီဟင်းကို အသေကြိုက်တာလေ။ အရှင်ကြိုက်လို့မရလို့။ :P သူ့ခမျာ သေပြီးတာတောင် ကောင်းကောင်းမနေရရှာဘူး။ ဗိုက်ကိုခွဲခံရတယ်၊ အစာသွတ်ခံရတယ် ၊ အကြော်ခံရတယ်၊ နှီးနဲ့ပြန်ချည်တာခံရတယ်၊ အင်းဒါကြောင့်လည်း ငါးဒုက္ခဟင်းလို့ခေါ်တာနေမှာလို့ စဉ်းစားမိသည်။
ကဲ အင်းစကူးမမရေ..ဘယ်သူဘယ်ဝါကိုဆိုလိုလည်းဆိုတာကို ထည့်မပြောတော့ဘူးနော် ။ အားလုံးသိကြမှာပါ။
ငါးဒုက္ခဟင်းလေးကို ချက်နည်းလေးနဲ့တစ်ကွ ပိုစ့်လေးတင်ပါအုံးနော်…ကျွန်တော် တက်လိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်စားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရေးသားသူ နေလင်း အချိန် 5:17:00 PM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
မနက်စောစော တောင်ကြိးအိမ်က ဖုန်းဝင်လာပါတယ်...
ဒီလိုမျိုး မဲ့မဲ့က သမီးစားဖို့ဆိုပြီး မကြာခဏဆိုသလို..
ပဲပုတ်ကြော်... အသားတုကြော်.... မြေပဲကြော် အစရှိသဖြင့်ပေါ့..
အဲဒီအချိန်မျိုးဆိုရင် ညီမကို ဟင်းဘူးပို့ဖို့အရေး
တစ်နေ့လောက်ကြိုပြီး ၀ယ်ခြမ်း...ချက်ပြုတ်...ကြော်လှော်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်...
တနေကုန် ဆီညှော်ခံပြီး ကြော်နေစရာမလိုတော့ဘူးလေ...
တောင်ကြီးမှာ အသင့်လုပ်ပြီး ဟင်းဘူးအကြော်တွေရောင်းနေပြီလေ...
မဲ့မဲ့ကိုလည်း ပင်ပင်ပန်းပန်း အညှော်ခံ ကြော်ပေးနေရမှာဆိုပြီး
အသင့်စားနိုင်တဲ့အတွက် အားလုံးက သဘောကျတတ်ကြတယ်လေ..
ဒီလိုပြောလို့ ညီမကို ကြော်ငြာနေတယ်မထင်ပါနဲ့...
ညီမကိုယ်တိုင်လည်း ဟင်းဘူးတွေ ဘယ်လိုလုပ်လို့..ဘယ်မှာရနိုင်တယ်ဆိုတာမသိပါဘူး...
ကိုယ်တိုင်လည်း စီးပွားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေကို ချီးကျူးမိလို့ပါ...
ဟင်းဘူး = အသင့်စားသုံးနိုင်သော ဟင်းကြော်ထုပ်
ဥပမာ။ ။ ပဲပုတ်ကြော်၊ အသားတုကြော်၊ မှိုခြောက်ကြော်၊ မြေပဲကြော်၊
ငါးခြောက်ထောင်းကြော်၊ အသားခြောက်ကြော်၊ အသားထောင်းကြော်၊
မုန်ညင်းချဉ်ကြော်၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်၊
(ဒါတွေအားလုံးဟာ..ညီမကို မဲ့မဲ့က ပို့ပို့ပေးတတ်တဲ့ ဟင်းဘူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်...
တခါတလေ.. ငါးဒုက္ခ...ထိုဖူးနှစ်ပြန်ကြော်တို့ တောင်ပါလာတတ်ပါတယ်...)
ရေးသားသူ Unknown အချိန် 7:29:00 PM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးမှ Recording Studio တွေအကြောင်းမှာ ဒုတိယအနေနဲ့ ထွန်းစတူဒီယို အကြောင်းပြောပြပေးပါ့မယ်...
ထွန်းစတူဒီယို ရဲ့ တည်နေရာကတော့ ည-၁၀၀၊ ဒေစီလမ်း၊ ဦးကြီးခမ်းရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့ ဖြစ်ပါတယ်...
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၀၈၁-၂၄၄၇၆ ပါ...
တာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာကတော့ ကိုခွန်တူး ဖြစ်ပါတယ်...
ထွန်းစတူဒီယိုကတော့ လောလောဆယ် တောင်ကြီးမြို့မှာ ပစ္စည်းအစုံဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်...
Computer Recording System ဖြစ်ပြီး Sound I/O Interface ကတော့ M-Audio Project Mix ဖြစ်ပါတယ်...
Recording Software ကတော့ Nuendo3ကိုသုံးပါတယ်....
Alesis HD-24 Hard disk Recorder လဲရှိပါတယ်...
ထွန်းစတူဒီယိုရဲ့ ပုံရိပ်အချို့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
Monitor Sound Box များ... KRK, Alesis Monitor one, JBL Studio Monitor
Studio Console (Mackie 24.8)
KB များ... Korg TR-61, Korg O1-WFD
KB, Korg Triton Pro
Guitar FX Processor, Boss GT-8
Tun Studio ၏ Control Room မှ Engineer ခွန်တူး
Vocal Mic, AKG C 414B-ULS Gold
Drums Set, TAMA Art Star ES
Studio တွေကို ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ရာမှာ Win Studio နဲ့ D&D Studio တွေက တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်မှာ Welcome ပွဲတွေရှိနေလို့ ပစ္စည်းတွေဖြုတ်ထားတဲ့အတွက် လောလောဆယ် မဖေါ်ပြပေးနိုင်သေးပါဘူး...
ကျန်ရှိတဲ့ Studio တွေအကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြသွားပါ့မယ်....
ရေးသားသူ AZYL အချိန် 8:29:00 AM 25 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ (၃) လ ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ အေးစက်သလိုဖြစ်နေလို့ စိတ်ပျက်နေကြောင်း ကိုရဲမြန်မာ ရဲ့ Post ကို ဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတွေလဲ နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်...
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ စတင်ချိန်ကစလို့ တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့သူတွေရော၊ အဝေးရောက်နေသူတွေရော ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ဒေသအကြောင်း ဗဟုသုတရော၊ အမှတ်တရရော၊ ထွေရာလေးပါးရော ပြောစရာ၊ ဆုံတွေ့စရာ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တာအားလုံးအသိပါ...
အဝေးရောက်နေသူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေ သိခွင့်ရသလို တောင်ကြီးက latest update ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေလဲ အဝေးရောက်သူတွေ အလွမ်းပြေသိခွင့်၊ ကြည့်ခွင့်ရအောင် ဖေါ်ပြပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်...
အစပိုင်းမှာတော့ အားလုံးက ကိုယ်သိတာလေးတွေ၊ တင်ပြချင်တာလေးတွေ ၀ိုင်းရေးကြတော့ post တွေ အများကြီးတက်တာပေါ့... နောက်တော့လဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် မအားကြတဲ့သူတွေများတာမို့ ကြာကြာမှတစ်ခါ post အသစ်တင်နိုင်ကြတော့တာထင်ပါတယ်...
ကိုရဲမြန်မာကတော့ ဒီ blog လေးကို အရမ်းမျှော်လင့်အားထားသူမို့ သူ့ကိုယ်ပိုင် blog ကိုတောင် ပစ်ထားပြီး တောင်ကြီးချယ်ရီကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့ အသိပါ... ကျွန်တော်ဆိုရင်လဲ blog ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိရာကနေ ကိုရဲမြန်မာတို့၊ ကိုကျော်စွာတို့၊ ကိုအောင်မိန်းတို့ရဲ့ တက်ကြွမှုတွေ ဓါတ်ကူးပြီး blog ၀ါသနာပါလာခဲ့တာပါပဲ...
ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေတာမို့ post တွေအများကြီး မတင်နိုင်ပါဘူး... Post တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့တော်တော်လုံးပမ်းရပါတယ်...
သူများတွေ ပြောကြဆိုကြတာကိုပဲ အားပေးရင်းနဲ့ မုဒိတာပွားရပါတယ်...
တောင်ကြီးချယ်ရီမှာ post အမြဲမတင်နိုင်ပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ အမြဲအားပေးနေတာပါ...
Post မတင်နိုင်တဲ့ တခြား Author တွေလဲ ဒီလိုပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်...
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကို ဒီလောက်ထိဝိုင်းဝန်းလာကြပြီးတော့မှ မပျက်စီးစေချင်ပါဘူး... ထာဝစဉ်တည်တံ့စေချင်ပါတယ်...
အားလုံးကလဲ ဒီသဘောအတိုင်း ရှိမယ်ထင်ပါတယ်...
ကိုရဲမြန်မာကို စိတ်မပျက်ဖို့ ပြောချင်သလို Author တွေအားလုံးကိုလဲ အချိန်ရရင်ရသလို post လေးတွေတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်...
တောင်ကြီးချယ်ရီအတွက် . . . အားလုံးအတွက် . . . အမြဲတမ်းအတွက်ပါ . . .
ရေးသားသူ AZYL အချိန် 8:54:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ကိုအယ်ဖြူ ကိုဟန်ထွန်း ကိုအောင်ဆိုထား တဲ့ သီချင်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်….
ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲ ငါရဲ့နေတို့ ရှေ့ကိုဆက်တိုးခဲ့ သာယာတဲ့ခရီး တစ်ခုရောက်မယ်ငါ့ရဲ့ရှေ့မှာမြင် ရတယ် သေချာတဲ့ စက္ကန်မိနစ်များက ငါကိုစောင့်ဆိုင်းဆဲ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲ နောက်ပြန်လည်ဖို့ ကိုယ်မတွေး ခဲ့
အကြိ်မ်ကြိမ်မှာ ဆိုးဝါးခါးသီးလွန်းတဲ့ အိမ်မက်ထဲ ပြန်မြင်ရောင်ဆဲပဲ အတိက်က ကလေးတစ်ယောက် ဘဝ ဟာ မှုန်ဝါးဆဲ ဘယ်လိုခက်ခဲ မလဲ ဘယ်လိုပင် ကြမ်းတမ်းလဲ ရင်ဆိုင်ရဲ ခဲ့ 
ယုံကြည်တဲ အတိုင်းပဲ ( ယုံကြည်တဲအတိုင်းပဲ ) ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲ ရှေ့ဆက်ခဲ့
(ဘဝဟာ ……. ( သေချာတယ်ကြမ်းတမ်းလိမ့်မယ်) (သာယာတဲ့နေတွေ့ရှိတယ်)
ကြမ်းတမ်း………………. နူးညံ…… (ရင်ခုန်သံများနဲ့ခင်းလို့ထား ))
အကြိ်မ်ကြိမ်မှာ ဆိုးဝါးခါးသီးလွန်းတဲ့ အိမ်မက်ထဲ ပြန်မြင်ရောင်ဆဲပဲ အတိက်က ကလေးတစ်ယောက် ဘဝ ဟာ မှုန်ဝါးဆဲ ဘယ်လိုခက်ခဲ မလဲ ဘယ်လိုပင် ကြမ်းတမ်းလဲ ရင်ဆိုင်ရဲ ခဲ့
ဘဝဟာ မျှော်လင့်ခြင်း အတွက်ကြမ်းတမ်းရဲ့ ဒီအိမ်မက်ထဲ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲရှေးဆက်ခဲ့…….
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 6:44:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 7:54:00 PM3ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 2:06:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လ ဒီလို အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ တတွေ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေဆိုတဲ့ Blog ကို စတင်ဖန်တည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ ဘယ်လိုအစပျိုးခဲ့သလဲ ဆိုတာလေး.. ဒီနေ့မှာ အမှတ်တရ ပြောထားခဲ့ပါမယ်.. တကယ်လို့ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ ဒီ Blog လေး တည်ရှိနေခဲ့မယ် ဆိုရင်..
တောင်ကြီးမြို့အတွက် Website တစ်ခု လုပ်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ စပြီးတွေ့စုံ ရင်းနှီးကြကတည်းက အားလုံးမှာ ဆန္ဒလေး ရှိခဲ့ကြပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်း လုပ်ဖြစ်ဖို့က အကြောင်းအပေါင်း မတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ မလှုပ်ရှားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ မြန်မာ Blog တွေကို ကျွန်တော်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး.. တောင်ကြီးအတွက် Blogspot မှာပဲ Blog တစ်ခု လုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ အကြံပေါ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Blog ဆိုတာကို အရင်က ကြားပဲ ကြားဖူးခဲ့တာပါ.. မြန်မာလို Blog တွေ ရှိမှန်းလဲ မသိခဲ့ပါဘူး.. ကျန်တဲ့ Senior တွေကတော့ ကျွန်တော့်ထက် အရင်သိထားခဲ့ကြ၊ Blog တွေ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်.. ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ သူတို့လဲ တောင်ကြီးမြို့အတွက် Blog တစ်ခုလုပ်ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ကြဘူးနဲ့ တူပါတယ်..
အဲ့ဒီမှာပဲ တောင်ကြီးမြို့ အတွက် Blog တစ်ခုလုပ်ဖို့နဲ့၊ အားလုံးကိုလဲ ၀ိုင်းကူကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း.. ဇွန်လ ၃ရက်နေ့၊ ဒီလို အချိန်မှာ ကျွန်တော် Blog Registeration စလုပ်ခဲ့ပါတယ်.. ပထမ Taunggyi.blogspot.com ကို ယူမယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြည့်တယ်.. ဒါပေမဲ့ သူများဦးထားလို့ တစ်ခြား ဘာနာမည် ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး.. ကျွန်တော်နဲ့ ကိုအောင်မိန်းတို့ Gtalk ကနေပြီး.. ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ကြည့်ကြတယ်.. တောင်ကြီးအတွက် Blog နာမည်ရှာရင်း taunggyitimes.blogspot.com ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်.. အဲ့ဒီ Blog က ပအိုဝ်း လူငယ်တွေက လုပ်ထားတာလို့ သိရတော့ ကျွန်တော်က တောင်ကြီးသား ရှမ်းကြီးကို စလိုက်သေးတယ်.. ပအိုဝ်းတွေတောင် ကျွန်တော်တို့ထက် ခြေလှမ်းသွက်တယ်လို့.. တောင်ကြီးသားတွေ ကျန်ခဲ့ပြီလို့ပေါ့..
သူတို့ blog က အရင်က English Version နဲ့ Political အကြောင်းတွေ ရေးထားတာတွေ့တယ်.. ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာလောက် ကတည်းက စပြီးလုပ်ထားတာတွေ့တယ်.. နောက် အဲ့ဒီ eng version blog ကို ရပ်ပြီး... Myanmar Version နဲ့ အသစ် မေလလောက်က ပြန်လုပ်ထားတာမှန်း သိခဲ့ရတယ်.. အစတုန်းကတော့ Political မပါတဲ့ Local Based Blog တစ်ခုလို့ ထင်မိတာပေါ့လေ.. နောက်တော့မှပဲ.. အကြောင်းအရင်းတွေ တိတိပပ သိခဲ့ရတော့တယ်... ထားပါတော့..
အဲ့ဒီမှာပဲ နာမည်ရွေးနေရင်း.. ပထမ taunggyimirror ဆိုတဲ့ နာမည်.. ဒုတိယ taunggyinews.. နောက် taunggyicherry (တောင်ကြီးချယ်ရီ)ဆိုပြီး ကိုအောင်မိန်းက အကြံပေးတော့ ကျွန်တော်ရောသူရော သဘောကြသွားတယ်.. နာမည်လှလှလေးပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ.. အဲ့ဒါနဲ့ Blogspot မှာ ရှာတော့လဲ လွတ်နေတာနဲ့ အဲ့ဒီ နာမည်ကိုယူပြီး Register လုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့ Mail နဲ့ Register လုပ်မိလျက်သား ဖြစ်သွားတယ်.. အဲ့ဒါကတော့ သိပ်မကောင်းဘူး.. လုပ်မဲ့လုပ် သူ့ဘာသာသူ သီးခြား ရပ်တည်တာ ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့.. Mail ကအစ အသစ်ပြန်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားမိပြီး.. အသစ်ပြန်လုပ်လိုက် ပါတယ်... အဲ့ဒီမှာတော့ နဲနဲလေး ပိုခေါ်လို့ကောင်းအောင်.. ပိုပြီးတော့လဲ တောင်ကြီးမြို့နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဆိုပြီးတော့.. တောင်ကြီးချယ်ရီမြေဆိုပြီး.. မြေ ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်.. အဲ့ဒီမှာပဲ taunggyicherryland.blogspot.com ဆိုတဲ့ Blog လေး စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်..
အစကတော့ Senior တွေ မအားတာနဲ့ပဲ ကျွန်တော် မတောက်တခေါက်နဲ့ သူများ လုပ်ထားတဲ့ Blog တွေလိုက်ကြည့်လိုက်.. တောင်ကြီးချယ်ရီမြေမှာ လိုတာလေးတွေ လိုက်ရှာထည့်လိုက်နဲ့ ကျိုးစားပမ်းစား လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. နောက်တော့ Invite လိုက်လုပ်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားတွေက စပြီး Author တဲ့ ထည့်တယ်.. ကိုအောင်မိန်း၊ ကိုကျော်စွာ၊ ကိုဇေယျာ၊ ကိုမျိုး ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပေါ့.. နောက်ပြီး မနိုင်းနိုင်းစနေကို သီးသန့် Invite သွားလုပ်တယ်.. သူက ရှမ်းပြည်ကလို့ သူ့ Blog မှာ ရေးထားတာတွေ တွေ့တာနဲ့ အားတက်သရော Invite လုပ်လိုက်ပါတယ်.. အစကတော့ သူလဲ မလာသေးဘူး.. ဘာမှန်းမသိသေးလို့နဲ့ တူပါတယ်.. ဒုတိယ အကြိမ် Invite လုပ်မှပဲ Author အဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်..
ကျွှန်တော်တို့ Blog ကလဲ အစကတည်းက အားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးသားမို့ တက်နိုင်သမျှ တောင်ကြီးနဲ့ ရှမ်းပြည်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Senior Blogger တွေကို လိုက်ဖိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. MaThinZar နဲ့ တစ်ခြား Blogger တွေကတော့ ကိုကျော်စွာ ဆီက သတင်းရပြီး လာကြည့်ကြတယ်.. သူလဲ Author ဖြစ်သွားပါတယ်.. အဲ့ဒီနောက်မှာပဲ Seinor Blogger ကြီးတွေရဲ့ ကြော်ငြာပေးမှုနဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကို လူသိများလာခဲ့ပါတယ်.. ၀င်ရေးမယ်လို့ ပြောကြတဲ့ သူတွေနဲ့ email ပို့ပြီး Post တွေ တင်ခိုင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ Blog က အတော်လေးကို စည်စည်ကားကား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့လဲ အရမ်းပဲ ပျော်ခဲ့ကြပါတယ်.. ကိုယ်ဖန်တီးပေးခဲ့တာလေးကို အများက လက်ခံအားပေးတာ ခံရတာလောက် ပျော်စရာကောင်းတာ မရှိပါဘူး.. အဲ့ဒီမှာပဲ ကျွန်တော်လဲ Blog စွဲပြီး.. တက်နိုင်သမျှ အချက်အလက်တွေ လိုက်ရှာ.. ဓာတ်ပုံတွေ လိုက်ရိုက်နဲ့ ကျန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်စရာတွေကို မေ့ဖြောက်ထားခဲ့ပါတယ်...
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲ Autors အင်အားတောင့်လာခဲ့ပြီး မရန်ကုန်သူ၊ မအေးမိစံ၊ ကိုနေလင်း၊ ကိုလွင်မိုး၊ MaDesertMoon အများကြီးပဲ ပါဝင်လာကြပါတယ်.. မထင်မှတ်စရာကောင်းလောက်အောင် တောင်ကြီးသူ၊ တောင်ကြီးသားတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ရခဲ့ပါတယ်.. Blog လေးလဲ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.. မြန်မာ Font အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေ ပြောတာနဲ့ ရအောင် eot တွေလုပ်ကြည့် Font တွေ ပြောင်းကြည့်နဲ့ နောက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်..
အဲ့ဒီမှာပဲ တစ်လပြည့်ခဲ့ပါတယ်.. Graphic Design တွေ ရတဲ့ ကိုချမ်းကလဲ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အတွက် Banner တွေ ပုံလေးတွေ ဆွဲပေးတာနဲ့ Theme ပြောင်းဖို့ ပြောတဲ့ သူတွေအတွက် Banner လေး ကိုကျော်စွာတို့က ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ အပြင်ကို ၂ပါတ်လောက် ခရီးသွားဖြစ်တာနဲ့ Blog ကို လွဲပေးထားခဲ့လိုက်တယ်.. အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကိုကျော်စွာကပဲ အက်တမင်လုပ်ပြီး.. Post တွေ တင်ပေးပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ အပြင်ရောက်နေတာတောင် နေ့တိုင်းနီးပါး ၀င်ကြည့်ြ့ဖစ်တယ်.. တစ်နေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Font ကို အရင် DL လုပ်ရတယ်.. တစ်နေ့ Computer တစ်လုံးဆိုတော့ Internet Cafe က စက်တွေမှာ မြန်မာ Font တော်တော်များများ တင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်.. အပြင်မှာရောက်နေရင်းနဲ့ Player ကို သီချင်းတွေရှာပြီး ထည့်ပေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်.. အဲ့ဒီတုန်းက ထည့်ပေးဖြစ်ခဲ့တာ.. အပုဒ် ၃၀ ကျော်မယ်နဲ့တူတယ်..
နောက်တောင်ကြီးကို ပြန်ရောက်တော့ နေရာပေါင်းစုံသွားပြီး ဓာတ်ပုံတွေ လိုက်ရိုက်တယ်.. Post တွေကိုလဲ တစ်နေ့ တစ်ခုလောက် တက်နိုင်အောင် ကျိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီမှာပဲ Personal တွေ စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ ပြောတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့၊ နောက်ပြီး Post တွေ သိပ်မတက်တာ တွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော် စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်.. တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဒီ Blog လေးကို အများကြီး မျော်မှန်းခဲ့တာပါ.. အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် မရှိရင် Blog ရပ်တန့်သွားမှာ စိုးရိမ်ပြီး စကားတွေ အများကြီးပဲ ပြောမိခဲ့တာ.. အဲ့ဒီလိုပြောလို့ လူမုန်းလဲ ခံခဲ့ရပါတယ်.. ကျွန်တော့်ကိုလဲ တော်တော်လေး ပြန်ပြောတဲ့ စကားတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်.. ဒါနဲ့ပဲ Blog မှာ ဆက်မရေးတော့ ဘူးကွာလို့ စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သေးတယ်.. ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတာခဲ့တာလေးကို စိတ်ထဲမှာ မေ့ဖြောက်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ.. နေ့တိုင်းနည်းပါး ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်.. နောက် စိတ်ကလဲ မပြတ်သေးတာနဲ့ Player မှာ DJ လုပ်ပြီး သီချင်း အသစ်တွေ ထည့်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. Post တော့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး.. နောက်တော့လဲ အရင်လိုပဲ ပြန်ပြီး Post တွေ ပြန်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီမှာပဲ Post 100 ပြည့်ပြီး.. ၂လရောက်ခဲ့ပါတယ်..
၂လပြည့်တဲ့ နေ့လေးက တော်တော်လေး ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်.. ကိုနေလင်းက 100 မြောက် Post တင်ပြီး.. ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေလဲ Dinner လေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေလေးဟာ လုပ်လုပ်ရှားရှား ရှင်ရှင်သန်သန်လေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေလဲ အားရကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်.. Author ကလဲ ၂၀ ပြည့်ခဲ့ပြီလေ.. အတန်အသင့် ခရီးရောက်ခဲ့ပြီလို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ၀မ်းမြောက်ခဲ့ကြပါတယ်..
နောက်တော့ taunggyicherryland.com ဆိုတဲ့ Domain ကို ကိုကျော်စွာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါင်းပြီး ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. အဲ့ဒီမှာပဲ blog ကို သွားပေါင်းဖြစ်ခဲ့တယ်.. blog.taunggyicherryland.com ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒါနဲ့ တပြိုင်တည်းပဲ user@taunggyicherryland.com mail ကို ပေးနိုင်ခဲ့တယ်.. နောက်တော့ Forum လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တော်တော်လေး နယ်မြေကျယ်လာခဲ့ပါတယ်.. website ကလဲ Senior တွေ ၀ိုင်းပြီးရေးနေကြတယ်လေ.. ကျွှန်တော်တို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ တောင်ကြီးမြို့အတွက် website တစ်ခုရယ် Blogရယ်၊ Mailရယ်၊ Forumရယ်တွေနဲ့ တောင်ကြီးမြို့လေး တတိယလှိုင်းနဲ့ အမှီ ခေတ်မီနိုင်တော့မယ်လို့ တွေးရင်း ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်နဲ့ ကျွန်တော် တော်တော်လေး ပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. တောင်ကြီးသူ၊ တောင်ကြီးသားတွေလဲ အလားတူ ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်..
နောက်တော့ ကျွန်တော် အက်တမင်လုပ်လာတာကနေ တောင်ကြီးသားတွေကို လွဲပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပေးခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ လုပ်စရာရှိတဲ့ Assignment တွေ မေ့ထားပစ်ခဲ့တာ ကြာပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီဘက်ပြန်လှည့်နိုင်အောင်၊ လုံးဝတစ်ယောက်ယောက် လွဲယူမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး လွဲပေးခဲ့ပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့ ပထမ တစ်ယောက်က မအားလို့လားမသိဘူး.. မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး.. အဲ့ဒီ အတောအတွင်း ကျွန်တော်လဲ .com ဆိုတဲ့ Domain နဲ့ အညီ Theme ပြောင်းမှသင့်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး.. Green Cherry Theme ကို နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီမှာပဲ တစ်ချို့ addin တွေ ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်.. အနည်းငယ်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ပြီး Blog ကို ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နည်းနည်း စိမ်းသွားတယ်လို့ ပြောတဲ့ အသံတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်.. ကျွန်တော်လဲ ဒုတိယ အကြိမ် ကြေငြာပြီး Admin လွဲပေးထားခဲ့လိုက်ပါတယ်.. အဲ့ဒါနဲ့ တချိန်ထည်းမှာပဲ Author တွေ ငြိမ်ကြသွားပါတယ်.. Post တွေလဲ သိပ်မတက်လာကြတော့ပါဘူး.. ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ ကျွန်တော်လဲ မသိဘူး..
အဲ့ဒီလိုနဲ့ အခု ၃လပြည့်တဲ့ နေ့ ကို ရောက်လာပါတယ်.. အခုတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်ပေါ်မလာကြတော့ပါဘူး.. တစ်နေ့ တစ်နေ့ Post တွေ တက်တာလဲ မတွေ့ရတော့ပါဘူး.. ကျွန်တော်ကတော့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေအတွက် Data တွေဆုဆောင်းထားလို့ တင်မယ်ဆိုရင် ၂ပတ်စာလောက် တင်စရာတွေ ရှိတာနဲ့ တစ်နေ့ တစ်ခု ပုံမှန်လေး တက်နိုင်သလောက် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်.. ၇ရက်လောက် ဆွဲခေါ်ပြီး စောင့်ကြည့်ပေမဲ့လဲ Post အသစ်တွေ တက်လာတာ မတွေ့၊ Comment နဲ့ cbox မှာလဲ ဘာသံမှ မကြားရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ.. အဲ့ဒီလိုသာ ဆက်သွားနေရင်တော့ ဒီ Blog ကို ရှေ့ဆက်သင့်သေးလား ရပ်ဆိုင်းရတော့မလားဆိုတာ စဉ်းစားလာရတော့မယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးမိလာပါတယ်.. ဘာမှ တိုးတက်မှုမရှိဘဲ ရပ်တန့်သွားတာထက်စာရင် လုံးဝအဆုံးသတ်လိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း စဉ်းစားနေမိပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေများ လိုအပ်လို့လဲလို့ တွေးမိပါတယ်.. အရင်က အထိုက် အလျှောက် အောင်မြင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားက အခုအချိန် မှန်နေလား၊ မှားနေလားဆိုတာ ဝေခွဲလို့ မရတော့ပါဘူး..
ဘယ်လိုပဲရှိရှိ ဒီ ၃လ ပြည့်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပထမ (၂)လတုန်းကလို့ ပျော်ရွင်သက်ဝင်မှုတွေ ရှိမနေတာတော့ သေချာပါတယ်.. ရှေ့ကိုဘယ်လို ခရီးဆက်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လဲ မသိတက်နိုင်အောင် ပါပဲ... တောင်ကြီးမြို့ အတွက် ဒီBlog လေး ရှိနေစေချင်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့လဲ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ တွေးနေမိတာကတော့ ဒီနေ့ဟာ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အတွက် (၃)လပြည့်တဲ့နေ့လား ဒါမှမဟုတ်... ?
ရေးသားသူ yma အချိန် 8:51:00 PM 23 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: အမှတ်တရ, အတွေးအမြင်, အထွေထွေ